Zvitofu zvakachipa, ndeipi yekutenga muna 2022? Kupisa nemari shoma
Low kushandiswa radiators
Portable air conditioner ine kupisa pombi
Zvitofu midziyo inoshanda kuwedzera tembiricha yemumba matinoisa. Zvinotibatsira kuti tigare tichidziya munguva dzinotonhora zvikuru. Kune marudzi akawanda ezvitofu zvichienderana ne rudzi rwehuni yatinoshandisa kuwedzera tembiricha.
Muchinyorwa chino tichaongorora marudzi ese ezvitofu zviripo uye zvakanakira nekuipira chimwe nechimwe. Mukuwedzera, iwe uchakwanisa kuziva mitengo uye kuwana avo vane humwe hutano uye mutengo wakanaka.
Zvitofu zvakachipa zvekupisa imba yako munguva yechando
Heino sarudzo yezvitofu zvakanakisa kudzivirira kutonhora munguva yechando. Nechero ipi yeaya mamodheru iwe unozobudirira sezvo iwo anofarirwa nevashandisi uye ndiwo ane kukosha kwakanyanya kwemari:
Orbegozo BP 5007 -... Ona maficha 962 Ongororo View deal
Orbegozo BP 0102 - Chitofu ... Ona maficha 253 Ongororo View deal
Orbegozo BB 5000 - Chitofu ... Ona maficha 432 Ongororo View deal
CHITOFU YEVANDA MATEMA ... Ona maficha 5 Ongororo View deal
Pellet chitofu 14 kW... Ona maficha 3 Ongororo View deal
AVANT AV7554 - Chitofu ... Ona maficha 145 Ongororo View deal
Zvakanakisa	Orbegozo BP 5007 -...
Unhu hwemutengo	Orbegozo BP 0102 - Chitofu ...
Chatinoda	Orbegozo BB 5000 - Chitofu ...
CHITOFU YEVANDA MATEMA ...
ari zvitofu zvepellet Vanga vachipararira nekufamba kwemakore nekuda kwekuita kwavo kwakanaka uye kugona. Kushanda kwayo kuri nyore uye hakudhure. Chitofu chine tangi yekuchengetedza mafuta, munyaya iyi, pellet. Patinoisa mudziyo mukushanda, sikuruu inofambisa pellet ichipinda mukamuri remoto kupisa moto pamwero unoratidza hurongwa hwemagetsi.
Ma pellets anopisa, kubudisa kupisa uye utsi hunofambiswa kuburikidza nekubuda kunze uko chimuney chekunze chakabatana.
Kana iwe uchida kuve nepellet chitofu, tora mukana wezvatinopa.
Ona zvitofu zvepellet
Imwe yemabhenefiti ayo inopa kugona kuronga nguva umo sitofu inobatidzwa kuti ipe kupisa mukamuri uye inodzima zvakare. Izvi zvitofu zvakavhiringika zvakanyanya nezvitofu zvebiomass, sezvo pellet iri rudzi rwemafuta ebiomass. Iyo inoumbwa nesawdust yakasungirirwa muchimiro chemasilinda madiki. Kazhinji, makirogiramu maviri emapellets anopa kupisa kwakafanana kunoitwa rita rimwe redhiziri.
Ndiwo zvitofu zvakachipa zviripo nhasi. Huturu hwayo ndiyo biomass inowanikwa mumasango. Dzinobva pazvitofu zvehuni zvehupenyu hwese, asi kushandisa tekinoroji yepamusoro. Izvi zvinoita kuti kushandiswa kwayo kuve nyore uye kupisa kunogadziriswa.
Sezvo mafuta avo ari ecological zvachose uye echisikigo, haana kukuvadza kune zvakatipoteredza. Ivo vakakwana kuti vatore mukana wekupisa kwakanyanya uye kwakachena.
ari zvitofu zvehuni ndivo vanyanya tsika. Iyi imidziyo inoshandisa huni sehuni. Huni dzinowanikwa pamiti. Kushandiswa kwaro kwezuva nezuva kuri mukicheni yekumaruwa, kunyange zvazvo inoshandawo kupa kupisa uye kuwedzera kutonhora kwekamuri.
Kazhinji, zvitofu zvose zvehuni zvine pombi inopera muchimini inodzinga magasi anogadzirwa mukupisa uye inobatsira kuderedza njodzi yekufema mweya wakasviba.
Ndiwo zvitofu zviri nyore kushandisa uye zvinopa kuzorora zvakanyanya nekuda kwekuwedzera kwenzvimbo yepamba iyo murazvo unopa. Zvinogona kutora maawa mana kuti murazvo upise, asi inogona kuchengetedza kupisa zvakanaka kusvika maawa makumi maviri. Chitofu chehuni chiri kupfuta kweanenge maawa mapfumbamwe chinopa kupisa kwakakwana kwehusiku hwose.
Kuda kutenga chitofu chehuni? Pano unovawana zvakachipa.
Ona zvitofu zvinopfuta huni
Huni dzinoshandiswa dzinofanira kuva nehunyoro hudiki kana uchida kuti dzirambe dzichitsva kwenguva yakareba. Kuoma kwehuni, ndiko kukurumidza kupisa.
Kune zvakare zvitofu zvehuni zvine hovhoni yekutora mukana wekupisa kunoitwa uye kubika zvimwe zvekudya zvakaita sechingwa, mapizza, mamwe maskewer nemarosi.
Dhizaini yeiyo zvitofu zvegesi inovabvumira kushanda zvakanyanya. Mafuta anoshandiswa pachiitiko ichi iri butane gasi. Vanowanzo kuve nekuita kwakanakisa. Kare vanhu vaitya kutenga nekushandisa magasi chaiwo kana butane gasi cylinders.
Zvisinei, marudzi aya ezvitofu parizvino akachengeteka zvikuru. Pamusoro pezvo, ivo vanokwanisa kugadzira mari yakawedzerwa pamwedzi uye tinogona kuishandisa chero nguva yenjodzi.
Zvitofu zvegasi zvinomira pachena nekuchipa zvakanyanya. Kana iwe uchida kutora mukana wemitengo yakanakisa, usapotsa zvatinopihwa.
Ona zvitofu zvegasi
Kushanda kwayo kuri nyore kwazvo. Iine furemu panoiswa butane gasi cylinder uye mbavha inotarisira kuchengetedza kupisa kunoshanda. Munguva yekuita, butane gasi rinopiswa neokisijeni mumhepo uye inopa kupisa muimba.
Zvitofu izvi zvinogona kutamiswa kubva panzvimbo kuenda kune imwe zviri nyore pazvinenge zvichidiwa (chero bedzi zvadzimwa). Iwo akanakira kudziyisa makamuri madiki, sezvaanoita nekukurumidza.
Aya marudzi ezvitofu haana kunyanya kuzivikanwa, asi anoshanda zvakanyanya. Iyo inotakurika sisitimu isingade chero mhando yekuisa uye / kana kugadzirisa. Mafuta ayo ari mvura (parafini) uye kupisa kwayo kwakanyarara.
Pakati pezvakanakira kusununguka kwayo kuzvitakura kubva pane imwe kamuri kuenda kune imwe uye nekupisa kwayo. Mukuwedzera, kupisa kunogadzirwa ne Mafuta eparafini haina kunyura kunge heater yemagetsi, asi inopararira zviri nani kutenderedza mukamuri. Izvi zvinoita kuti kunzwa kwekunyaradzwa kunopa kukuru.
Vazhinji vashandisi vanosarudza zvitofu zveparafini kana parafini nekuda kwekukosha kwazvo kwekoriori uye kuchengetedzeka. Kana uchida kutenga chitofu cheparafini, tora mukana wezvatinopa.
Ona zvitofu zveparafini
Zvichienzaniswa nekudyiwa kwezvimwe zvitofu, chitofu cheparafini chinodyiwa chakaderera zvakanyanya.
ari Magetsi emagetsi Iwo maturusi anoshandisa magetsi kupisa kupikisa uye kuwedzera ambient tembiricha. Ivo vanopa kwakachena uye kwakachena kupisa, sezvo isingaburitse chero mhando yekubuda. Imwe yezvipingamupinyi ndeye kuwedzera kwemari yemagetsi.
Kushandiswa kwezvitofu zvemagetsi kwakada kupararira uye ivo vakasununguka kutakura kubva kune imwe kamuri kuenda kune imwe uye kunyangwe iwe ukaenda rwendo. Nekudaro, ivo havana kunaka maererano nekuchengetedza, nekuti ivo vanowedzera bhiri remagetsi zvakanyanya kana vakashandiswa kazhinji.
Zvitofu zvemagetsi zvinogara zviri kutenga zvakanaka kupisa makamuri nenguva. Iwo akachipa uye akaderera uremu, saka iwo akakwana kune dzimwe nguva kushandiswa.
Ona zvitofu zvemagetsi
Izvo zvakanaka kana iwe uchida kutarisa kupisa mune imwe kana maviri kamuri uye haadi kupisa kupararira mukati memakamuri ese emba.
Variables kutariswa pakusarudza chitofu
Kusarudza imwe rudzi rwechitofu kana imwe, zvakakosha kufunga nezve akati wandei zvinhu:
Chekutanga kugona kwechitofu kugadzira kupisa nemutengo wakaderera. Kazhinji, simba rakawanda rechitofu, rinoda mafuta akawanda kana kuti rinopedza magetsi akawanda (mune chitofu chemagetsi).
Kuti tizive simba rakakwana rekoriori yechitofu chedu, tinofanira kuziva nzvimbo yose yeimba. Simba rinopimwa mu kW. Imwe neimwe kW yesimba inokwanisa kudziyisa 8 square metres Of surface. Saka, kana imba yako iri 80 square metres, simba re10 kW richakwana.
Kuti uzive kuti ndechipi chitofu chakanakira mamiriro ako ezvinhu, zvakakosha kuziva kamuri iyo ichanyanya kushandiswa kana kuti ichaiswa kupi. Kana imba huru iri 30 square metres, tinofanira kushandisa simba rakati wedzerei kupfuura kana iri 20 square metres. Kuti uwedzere kushandiswa kwechitofu, zvinokurudzirwa kushandisa dhiyabhorosi data mu kW yataurwa pamusoro apa.
Nzvimbo yechitofu ndiyo inosarudza kushanda. Kana kamuri yatinozoisa kana kuisa ndiyo inodziya zvakanyanya, tichafanira kuishandisa nguva shoma. Zvakasiyana, kana kuri kutonhora zvakanyanya, isu tinofanirwa kugadzirisa mukamuri kuti tideredze kushandiswa kwechitofu.
Kuti uwedzere kuwedzera kushanda kwechitofu, edza kusarudza nzvimbo mune imwe nzvimbo yekamuri ine kunyanya kunaka kwekudzivirira, kuitira kuti kupisa kubva pachitofu kusarasikirwe nemadziro kana mahwindo. Zvakakosha kusiya nzvimbo inenge 40 cm pakati pemadziro nechitofu kana chero chinhu chinopfuta kudzivirira moto unobvira.
Izvo zvinodikanwa chose kuti kamuri yatinoisa chitofu ive nemhepo inofefetera uye yekudzinga chiutsi kudzivirira kupisa kwakanyanya kana chero njodzi yemoto.
Windows uye insulation
Kana imba yacho iine insulation yakanaka uye mahwindo ane glazed kaviri, chitofu chichaita zvirinani. Usakanganwa kuenda kureba anenge 30-40 cm pakati pechitofu nechero chinhu chinogona kutsva.
Nzira yekusarudza chitofu
Kana zvese zvasiyana zvekufunga nezvazvo zvazivikanwa, tinogona kusarudza kuti ndeipi chitofu chakanakira isu.
Zvitofu zvehuni ndizvo zvinopa kupisa kwakanyanya kwekuita uye kupisa kwakachena. Dzinogona kushanda pahuni dzinobatikazve sekuchekesa huni. Mukuwedzera, vane chinhu chekushongedza icho murazvo unotipa. Rinokwanisa kutipa iwo mamiriro epamba atiri kutsvaga. Kune akawanda mamodheru ekuchinjisa kune yekushongedza iyo yatinoda zvakanyanya. Pakati pezvakanakira izvozvo tinozviwana haatombodi chero basa. Vanongoda kubatana kune kunze kwechiutsi.
Kune rumwe rutivi, zvitofu zvakavakwa nesimbi uye zvinhu zvinoramba zvichigadzirirwa kupisa nzvimbo dzakakura kupfuura huni.
Kana iwe uchida kupisa kunokurumidza asi kusingagumi, sarudza chitofu chakagadzirwa nesimbi. Kana iwe uchida kupisa kune simba uye kwenguva refu, asi zvishoma pakutanga, Sarudza huni, biomass kana pellet zvitofu.
Pamhando yega yega yehuni pane mhando dzinopa kuita zvirinani uye zvitofu zvinoshanda.
Kune zvitofu zvehuni tinowana mabhureki anotungamira saRocal, Carbel, Hergom naBronpi.
Pellet zvitofu zvine mazita anozivikanwa akadai Lacunza, Ecoforest, Bronpi uye Edilkamin.
Kana ari zvitofu zvegasi tinowana mhando dzine simba dzakadai se DeLonghi uye Orbegozo.
Zvezvitofu zveparafini tine mabhureki ane yakanaka mhando / mutengo reshiyo senge Qlima, Webber naKayami.
Zvitofu zvemagetsi zvine mhando yakakura yemhando, sezvo zviri zvekutengesa zvakanyanya. Tinowana mhando dzakanakisisa dzakadai se Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi uye Taurus.
Neruzivo urwu unogona kusarudza kuti ndechipi chitofu chakanakira mamiriro ako uye chengetedza zvakanyanya sezvinobvira pakudziya uchifarira zvese zvakanaka.
1 Zvitofu zvakachipa zvekupisa imba yako munguva yechando
2 Mhando dzezvitofu
2.1 Portable air conditioner ine kupisa pombi
2.2 Ceramic hita
2.3 Low kushandiswa radiators
2.4 Mafuta radiator
2.5 Mbavha yehuni
2.6 Bioethanol zvitofu
2.7 Pellet zvitofu
2.8 Mbavha yehuni
2.9 Masitofu egasi
2.10 Chitofu cheparafini
2.11 Magetsi emagetsi
3 Variables kutariswa pakusarudza chitofu
3.1 Kupisa simba
3.2 Saizi yekamuri
3.5 Windows uye insulation
4 Nzira yekusarudza chitofu
Zvitofu zveparafini neparafini
Pellet uye biomass zvitofu